Ọ bụla ọzọ na Software Yiri ConvertXtoDVD? Edozi.
> Resource> DVD> Nweta Best Software Yiri ConvertXtoDVD
ConvertXtoDVD dị ukwuu. Ma mgbe ụfọdụ, nwere ike ị chọrọ ịhụ ụfọdụ software dị ka ConvertXtoDVD n'ihi ihe ụfọdụ. Ebe a, m ga-ewebata a usoro dị ka ConvertXtoDVD, nke na-eme otu ihe ahụ dị ConvertXtoDVD ma na-amị mma mmepụta mma. Dị ka anyị nile mara, ConvertXtoDVD adịghị hapụ a Mac version. Ya mere, ke ibuotikọ emi, Aga m nwekwara ike ikwu a Mac omume yiri ConvertXtoDVD.
Nke ahụ bụ s Wondershare DVD Onye Okike (DVD Creator for Mac). Ọ bụ ihe dị mfe na-eji DVD ọkụ software ngwá ọrụ. Na ya, ị nwere ike ngwa ngwa ọkụ ọ bụla media faịlụ ka ọ bụla na-ewu ewu recordable diski ụdị, sịnụ, DVD-5 na DVD-9; DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD + RW, DVD + R DL, DVD-R DL, DVD-Ram. Na additon ndị a, ọ na-ahapụ gị akuku, ewepụtụ, bugharia videos, tinye ndabere music / Foto dị, hazie gị onwe gị DVD menu, na ndị ọzọ.
Ọzọ, ị pụrụ izo aka zuru ezu ndu nke Windows version. Na-arụ ọrụ usoro on Mac bụ n'ụzọ yiri nke ahụ.
1 Import vidiyo ma ọ bụ foto a software dị ka ConvertXtoDVD
Mgbe ị malite a usoro dị ka ConvertXtoDVD, ị nwere ike iji otu n'ime ụzọ abụọ mbubata gị videos faịlụ (Cheta na: foto faịlụ na-ekwe ebe a). Otu bụ ka ịdọrọ na dobe videos ogologo n'ime ngwa a. Nke ọzọ bụ na-pịa Import button ka ịgbakwunye faịlụ na ị chọrọ. Jide n'aka na video usoro ziri ezi. Bụrụ na ọ bụghị, pịa "↑" ma ọ bụ "↓" nhọrọ na ala ịgbanwe ya. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ otu a ole na ole videos ọnụ na-etolite a isi, dị nnọọ pịa Add aha nhọrọ ime ya.
2 Dezie video faịlụ (Nhọrọ)
The wuru na-video nchịkọta akụkọ enye gị ohere ime ihe ndị dị mfe editting ọrụ, sịnụ, akuku, ewepụtụ, bugharia, watermark, mmetụta, wdg Dị nnọọ malite a video nchịkọta akụkọ nanị site pụta ìhè na video ị chọrọ na mgbe ahụ na ịpị "Dezie" button . All mgbanwe ga-etinyere ozugbo na e nwere ike previewed na ozugbo.
3 hazie a DVD menu
Hazie a ahaziri DVD menu maka gị onwe gị DVD, dị nnọọ ịgbanwee gaa na NchNhr taabụ na n'elu ịhọrọ otu DVD menu template-amasị gị, na mgbe ahụ hazie ya na ọkacha mmasị gị ndabere image / music, item ọnọdụ, button, ederede na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-achọghị a menu, ị nwere ike họrọ "Ọ dịghị NchNhr". Pịa green ala akụ button, ị nwere ike nweta ihe free menu ndebiri online.
4 ịhụchalụ gị oru ngo na-amalite ọkụ a DVD
Iji hụ na mmepụta mmetụta, ị nwere ike pịa "Preview" taabụ ka ịhụchalụ gị oru ngo na ozugbo. Ọ bụrụ na ọ ese akwa, ị dị nnọọ fanye a ide DVD diski, na mgbe ahụ see "Ọkụ" bọtịnụ na ala-nri akuku nke interface ka ọkụ gị DVD a usoro yiri ConvertXtoDVD.
Atụmatụ: Ọ bụrụ na ndị size nke ndị a dị ka mgbasa ozi faịlụ bụ karịa 4.7G (DVD5), ma ị na-enweghị DVD9 discs (7.9G), dị nnọọ fanye a DVD5 diski kama n'ihi na ngwa ga-akpaghị aka mpikota onu gị faịlụ dabara a DVD5 diski ( 4.7G).
Nweta Best usoro dị ka breeki aka maka Windows (Mountain odum & Mavericks)